Baolina kitra - "Mondial 2022" :: Hifanesy ireo lalao roa hihaonan’ ny Barea sy RD Congo • AoRaha
Baolina kitra – « Mondial 2022 » Hifanesy ireo lalao roa hihaonan’ ny Barea sy RD Congo
Hotanterahina amin’ny fiandohan’ny volana septambra 2021 ny lalao mandroso sy miverina hihaonan’ ny Barean’i Madagasikara sy ny ekipam-pirenen’ny RD Congo, amin’ny fifanintsanana hiadiana ny tapakilan’ ny “Mondial 2022”. Hiaraka amintsika ao amin’ny vondrona J, amin’izany i Benin sy Tanzania. Mitovy endrika amin’ny fandaharan-dalao tamin’ny fifanintsanan’ny CAN 2021, izay nifanandrinantsika mandroso sy miverina tamin’i Côte d’Ivoire, ny fandaharam-potoanan’ity fifanintsanan’ny fiadiana ny amboara maneran-tany ity.
Hotontosaina amin’ny 1 – 4 septambra 2021 ny lalao mandroso, izay hanafihantsika ny Léopards any amin’izy ireo. Amin’ny 5 – 7 septambra 2021 kosa no horaisintsika eto an-toerana izy ireo. Raha ny fandaharampotoanan’ny fanjakana malagasy dia handray an’ireo lalao fifanintsanana amin’ny “Mondial” ny kianja Barea, etsy Mahamasina.
Somary enjinjenjika ihany ny fandaharam-potoana hahafantarana izay ekipa dimy hisolo tena an’i Afrika amin’ ity fifaninanana maneran-tany ity. Hampiantrano ny lalao voalohany hifanandrinantsika amin’i Benin i Madagasikara, amin’ny 5 – 8 jona 2021, mialoha ny handehanana any Tanzania amin’ny 12 – 14 jona 2021. Mitovy tsy misy valaka amin’ny fandraisantsika an’i Etiopia sy fanafihana tany Nizera tamin’ny fifanintsanan’ny CAN 2021 ihany koa ireo fandaharam-potoana ireo. Toy izany ihany koa ny handehanantsika any PortoNovo, amin’ny 6 – 9 oktobra, mialoha ny hampiantranontsika farany an’i Tanzania amin’ ny 10 – 12 oktobra 2021.
Azo heverina ho sarotsarotra, raha oharina amin’ny fifanintsanan’ny CAN 2021 ny herijika hiakaran’i Madagasikara amin’ity fifaninanana ity. Raha tsiahivina dia ireo firenena voalohany avy amin’ireo vondrona folo no hiatrika ny lalao sakana mandroso sy miverina hahafantarana izay ekipa dimy hiaro ny voninahitr’i Afrika amin’ny fiadiana ny amboara eran-tany, hatao any Qatar, amin’ny taona 2022.